EGLIZY KATOLIKA AMBODIFOTATRA SAINTE-MARIE : Andalana ny fampidirana azy ho harem-bakoka maneran-tany – Free News
samedi, 29 janvier 2022 - 12:29
Nijery ifotony ny asa fanamboarana ny Minisitera ny Sabotsy teo.
Accueil/Kolontsaina/EGLIZY KATOLIKA AMBODIFOTATRA SAINTE-MARIE : Andalana ny fampidirana azy ho harem-bakoka maneran-tany
EGLIZY KATOLIKA AMBODIFOTATRA SAINTE-MARIE : Andalana ny fampidirana azy ho harem-bakoka maneran-tany
Taorian’ny nahatafiditra ho isan’ny harentsaina tsy azo tsapain-tanana ho an’ny zanak’olombelona ny Kabary Malagasy, dia ny dingana fampidirana ny Eglizy Katolika Ambodifotatra ao Sainte-Marie ho harem-bakoka maneran-tany indray izao no imasoan’ny Minisiteran’ny Serasera sy ny Kolontsaina. Ity Eglizy ity izay Fiangonana kristiana katolika voalohany niorina teto Madagasikara tamin’ny taona 1837, izany hoe 185 taona lasa izay.
Andalam-pahavitana ny asa fanamboarana ny Eglizy katolika Ambodifotatra ao Sainte-Marie, izay natomboka ny volana febroary 2021. Ny Fiangonana katolika Ambodifotatra dia voasokajy ho harem-bakom-pirenena (patrimoine national) ka ny Minisitera misahana ny kolontsaina no tompon’andraikitra voalohany amin’ny fiahiana azy. Mahasarika mpizahantany maro ny fitsidihana ny Fiangonana noho izy manan-tantara ary tafiditra ao anatin’ny zotra na « circuit » atolotra ny mpizahantany, ilay antsoina hoe « Pirate Island ». Izy io rahateo no Fiangonana kristiana katolika voalohany niorina teto Madagasikara tamin’ny taona 1837, izany hoe 185 taona lasa izay. Tsy nisy fikojakojana nandritra ny taona maro anefa ity Fiangonana ity ka nisy fahasimbana goavana, ary notandindomin-doza hatrany, natahorana ho rava noho izy amoron-dranomasina ka be rivotra.
Raha tsiahivina, ny volana Jona 2019 no nitsidika io toerana io Ramatoa Minisitry ny Serasera sy ny Kolontsaina, Lalatiana Rakotondrazafy Andriatongarivo, sy ny mpiara-miasa aminy ka nampanantena tamin’ireo pretra sy relijiozy ary ny kristiana katolika mpivavaka ao fa tsy maintsy amboarina tanteraka ny Fiangonana. Noho ny fisian’ny valanaretina dia ny volana novambra 2020 vao vita tanteraka ny dingana samihafa tamin’ny tolo-bidy amin’ny maha-tsenan’asam-panjakana azy, ka ny volana febroary 2021 vao afaka nanomboka ny asa.
Ho vita ny Febroary izao ny asa
Ny Sabotsy lasa teo, nisy ny fitsidihana arak’asa nataon-dRamatoa Minisitra sy ny mpiara-miasa aminy, ny solombavambahoaka any Sainte-Marie, ny ben’ny tanana, ireo tompon’andraikitra ara-panjakana tany an-toerana ny Fiangonana Katolika Ambodifotatra ao Sainte-Marie. Nandritra izany no nahitana fa tsy mbola mahafa-po tanteraka ny kalitaon’ny asa ka nisy ny toromarika hentitra nomena ny orinasa mpanamboatra mba ho voahaja amin’ny antsipirihany ny bokin’andraikitra (cahier des charges). Ny fiandohan’ny volana Febroary ho avy izao kosa no tombanana ho vita tanteraka izany asa fanamboarana izany. Ny tetikasa PIC (Pôle Integré de Croissance) no mamatsy vola ny fanamboarana.
Tsiahivina fa anisan’ny harem-bakoka kasain’ny ekipa ankehitriny mitantana ny Minisiteran’ny Serasera sy ny Kolontsaina hampidirina ao anatin’ny lisitry ny harem-bakoka maneran-tany (patrimoine mondial) ny Eglizy katolika Ambodifotatra ka efa ao anatin’ny dingana miroso amin’izany ankehitriny araka ny dinika nifanaovan-dRamatoa Minisitra tamin’ny CPM (Comité du Patrimoine Mondial) eo anivon’ny Unesco tamin’ny diany farany tany Paris Frantsa ny Novambra 2021.
Maro ny pitsopitsony arahina
Ny volana Mars 2022 ho avy izao no hisy ireo manam-pahaizana avy amin’ny ICOMOS (International Council of Monuments and Sites) hijery ny Fiangonana ka hanao ny fanadihadiana mialoha (études en amont) hijerena raha manana ilay antsoina hoe « Valeur Universelle Exceptionnelle» hahafahana mampiditra azy ao anaty lisitry ny harem-bakoka maneran-tany ity Eglizy Katolika ity amin’ny maha-vakoka azy. Ampahafantarina fa maharitra sady maro ny pitsopitsony (procédures) tsy maintsy arahina ka ny taona 2024 vao handray fanapahan-kevitra ny CPM eo anivon’ny UNESCO.
FITARAINANA TENY AMIN’NY CFM: Ananan-dRavalomanana 1 461 miliara ve izany ny Malagasy !
Fisorohana ny loza : Notsirihina ara-teknika ireo fiaran’ny minisiteran’ny Rano
ANTONTANISA COVID-19 : 114 ireo tranga vaovao teto Analamanga tao anatin’ny herinandro
FITSINJARAM-PAHEFANA TENA IZY: Tombanana amin’ny asa vitany ireo Governoram-paritra
RAHARAHA VOLAMENA 73,5KG : Voaporofo ny hosoka sy fampiasana hosoka niseho